Cloudwords - ၀ ယ်လိုအားနှင့်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ရန်မောင်းနှင်ရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက် Martech Zone
သောကြာနေ့, မေလ 20, 2016 ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ 1, 2021 Douglas Karr
ကုမ္ပဏီများအတွက်နိုင်ရန်အတွက် ဝယ်လိုအားထုတ်လုပ်နှင့်တကမ္ဘာလုံးကြီးထွား၎င်းတို့သည်ပစ်မှတ်ထားပရိသတ် ၈၀% နှင့်ဆက်သွယ်ရန်ဘာသာစကား ၁၂ ခုပြောရန်လိုအပ်သည်။ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ င်ငွေ၏ ၅၀% ကျော်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်များထံမှရရှိသောကြောင့်ဒေါ်လာ ၃၉ + ဘီလီယံရှိသောအကြောင်းအရာ # နေရာချထားမှုနှင့် # ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်များ၌ဖောက်သည်များပါ ၀ င်မှုကိုတွန်းအားပေးရန်အဓိကကျသည်။ သို့သော်၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုချဲ့ထွင်ရန်လျင်မြန်စွာဘာသာပြန်ဆိုရန်လိုအပ်သောကုမ္ပဏီများသည်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ၄ င်းတို့၏တည်နေရာပြလုပ်ငန်းသည်လက်စွဲ၊ အချိန်ကုန်၊ မတတ်နိုင်သော၊
စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်များအတွက်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုပို့ဆောင်ရန်အတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အလိုအလျောက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဝက်ဘ် CMS စနစ်များတွင်များပြားသောပမာဏကိုဖန်တီးသည်။ ဘာသာစကားမျိုးစုံသောပရိသတ်များအနေဖြင့်၊ ဒေသတွင်းစျေးကွက်များအတွက်ဒေသတွင်းလိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်ဘာသာပြန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကထိုစနစ်များကိုမသုံးကြပါ၊ ထို့ကြောင့်ရလဒ်များသည်မတတ်နိုင်သောနေရာချထားမှုဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအချိန်ဇယားများနှင့်ကိုက်ညီရန်စျေးကွက်သမားများသည်ဘာသာပြန်ဆိုမှုကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အချိန်နှင့်ဘတ်ဂျက်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်အချို့သောစျေးကွက်အတွက်အချို့သောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသာဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဝင်ငွေရရှိရန်အခွင့်အလမ်းများပေါ်ပေါက်စေသည်။
Cloudwords သည်ဖြေရှင်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာကွာဟမှု.
Cloudword များသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြစ်သည်။ Global Go-to-Market Hub အနေဖြင့် Cloudwords သည်ကုမ္ပဏီများအကြားရှိအကြောင်းအရာအားလုံးအတွက်ဒေသအလိုက်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုအလိုအလျောက်ဘာသာပေါင်းစုံကမ္ဘာချီလှုပ်ရှားမှုများကို ၃-၄ ဆပိုမိုမြန်ဆန်စေပြီးကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံး ၃၀% ကိုအလိုအလျောက်ကူညီပေးသည်။ Richard Harpham၊ Cloudwords ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
တကယ့်နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Cloudwords သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပထမဆုံး cloud-based ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းအလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ Cloudwords သည်စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက် ၂၀ ကျော်၊ အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဝက်ဘ် CMS စနစ်များအတွက်ချောမွေ့သောပေါင်းစည်းမှုကိုပေးသည်။ ၎င်းတို့တွင် Marketo၊ Adobe၊ Oracle၊ HubSpot, WordPress နှင့် Drupal၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း၊ စီးပွားရေး - ကျယ်ပြန့်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုများကိုအမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ခြင်း၊
Real-time Analytics နှင့်အစီရင်ခံစာများ။ အသုံးစရိတ်များကိုခြေရာခံရန်၊ လုပ်ငန်းစဉ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်ကမ္ဘာနှင့်ဒေသအဆင့်တွင်အရည်အသွေးနှင့် ROI ကိုတိုင်းတာရန်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကင်ပိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပထဝီဝင်အနေအထားများအရကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ၊ ဒေသတွင်းနှင့်ဒေသတွင်းလှုပ်ရှားမှုများအားမဟာဗျူဟာနှင့်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ပိုမိုလျင်မြန်စွာစီမံ။ အကောင်အထည်ဖော်ပါ။ ဘာသာပြန်ပရောဂျက်များကိုဖန်တီးပြီးစွမ်းအားမြင့် dashboard များဖြင့်တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံပါ စွန့်ပစ်ခံရသည့်အဖွဲ့များကိုဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းကိုဗဟိုပြုခြင်းဖြင့်အလိုအလျောက်သတိပေးချက်များနှင့်သတိပေးချက်များကိုရယူပါ။
Cloudwords OneReviewဖြေ။ ။ စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ရှေ့ဆောင်ပူးပေါင်းပါ ၀ င်မှုဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းကိရိယာတစ်ခု၊ OneReview ရဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာစွမ်းဆောင်ရည်ကဘာသာပြန်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်တည်းဖြတ်ရန်နှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
OneTM Cloudwordsဖြေ - ဗဟိုမှလက်ခံသော Translation Memory ဒေတာဘေ့စ်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ဘာသာပြန်ပြီးသားစကားလုံးများနှင့်စကားစုများကိုသိမ်းဆည်းပြီး၎င်းတို့ကိုဒေတာဘေ့စ်ထဲမွမ်းမံပေးသည်။ ဘာသာပြန်သူများသည်သင်၏ကုမ္မဏီ၏ OneTM ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးဘာသာပြန်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချိန်နှင့်ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစေပြီးစျေးကွက်အမျိုးမျိုးနှင့်ဘာသာစကားမျိုးစုံတွင်အမှတ်တံဆိပ်စာတိုပို့ခြင်းများကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
Cloudwords သည် Fortune 500 နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ၂၀၀၀ ကုမ္ပဏီများအတွက် CA Technologies, Palo Alto Networks၊ Hach, McDonald's, Siemens, Marketo, Iron Mountain, Fitbit, Patagonia နှင့် Blackboard တို့ပါဝင်သောဒေသတွင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အဓိကကျသောမိတ်ဖက်ဖြစ်သည်။
Cloudwords သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြုလုပ်နေသည့်မည်သည့်ဖောက်သည်အတွက်မဆိုအရေးကြီးသည့်လိုအပ်ချက်ကိုဖြေရှင်းပေးသည်။ Richard Harpham၊ Cloudwords ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
Cloudwords သည် Marketo အား၎င်း၏ Global Websites များကိုထိန်းချုပ်သည်
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းပလက်ဖောင်း Marketo သည် Cloudwords ဖောက်သည်များ၏ပစ်မှတ်ထားသည့်ဒေသများရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရိသတ်များအတွက်ဒေသတွင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပို့ဆောင်ပေးသည့်ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Marketo အဖွဲ့သည်ဒေသတွင်းအကြောင်းအရာများအတွက်အလှည့်အပြောင်းအချိန်များကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်နိုင်ခဲ့သည်၊ သို့မှသာ၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆိုဒ်များကိုအမေရိကန်ကွန်ရက်ဆိုက်၏တစ်ချိန်တည်းတွင်ရက်သတ္တပတ်များသို့မဟုတ်လများအကြာတွင်မွမ်းမံနိုင်သည်။ ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုအပြည့်အစုံကိုဖတ်ပါ။
Palo Alto ကွန်ယက်များသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရိသတ်များသို့ Cloudwords ပိုမိုမြန်ဆန်စေခဲ့သည်
ကွန်ယက်နှင့်စီးပွားရေးလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ Palo Alto Networks သည်ဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရန်လိုအပ်သလောက်နီးပါးဘာသာပြန်ခြင်းကိုမပြုခဲ့ပါ၊ Cloudwords သည်အဖွဲ့အားဒေသခံစီမံကိန်းများအလွယ်တကူစီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြုသည်။ Adobe Experience Manager နှင့် Cloudwords အကြားရှိအလိုအလျောက်ကြားခံဆက်သွယ်မှုသည်ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေပြီး၊ ဒေသတွင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကို ပိုမို၍ မကြာခဏဖန်တီးရန်၊ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဝယ်လိုအားနှင့်ဝင်ငွေများကိုမောင်းနှင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုအပြည့်အစုံကိုဖတ်ပါ.
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်အခြေစိုက်ပြီး Cloudwords သည် Storm Ventures နှင့် cloud computing အမြော်အမြင်ရှိသူများဖြစ်ကြသော salesforce.com ကိုတည်ထောင်သူ Marc Benioff ဖြစ်သည်။ အီးမေးလ် discover@cloudwords.com သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခရီး www.cloudwords.com ပိုမိုသိရှိလိုပါကနှင့်တွစ်တာပေါ်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစကားပြောဆိုမှုတွင်ပါဝင်ရန် @CloudwordsInc နှင့်ပေါ် Facebook က.
Tags: Adobeကျောက်တံတား, CA နည်းပညာများတိမ်တွေDrupalဆွဲဆောင်မင်္ဂလာပါဖိုင်မျှဝေခြင်းပလက်ဖောင်းများFitbitကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာကွာဟမှုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများHachhubspotသံတောင်ဒေသခံစျေးကြီးမက်ဒေါ်နယ်ရဲ့Oracle ကPalo Alto NetworksတာဂိုနီးယားSiemensသီရိဘာသာပြန်ချက်WordPress